Ciraaq: Al-cabaadi oo yiri “Waan soo ceshaneynaa Ramaadi” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciraaq: Al-cabaadi oo yiri “Waan soo ceshaneynaa Ramaadi”
A warsame 25 May 2015 25 May 2015
Mareeg.com: Rai’sal wasaraaha Ciraaq, Xaydar Al-Cabaadi waxa uu sheegay in magaalada Ramadi dib looga qabsandoono Daacish mudo maalmo gudahood ah.
Al-Cabaadi ayaa laakiin BBC u sheegay in loo baahanyahay taageero dheeri ah oo uga timaada xulafada caalamiga ah ee ay wada shaqeeyaan.
Ciidammada Ciraaq ayay soo wajaheen tiro guuldarooyin ah oo ay kala kulmeen Daacish sanadkii hore, maleeshiyo yar oo soo weerartay ayayna uga soo soo baxeen magaalada Ramadi todobaadkii hore.
Xoghayaha difaaca ee Maraykanka Ashton Carter, ayaa sheegay axadii in ciidammada Ciraaq ay iska soo xireen rajadii ay ku dagaalami lahaayeen.
Carter ayaa barnaamij CNN kabaxa u sheegay in Ciidammada Ciraaq ay doorteen in ay isaga baxaan magaalada iyaga oo aad uga tiro badan maleeshiyada soo weerartay.
Hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa shiicada ee Xisbullah Xasan Nasrallah ayaa sheegay in adduunyadu ay wajahayso khatar aan hore loo arag xagga taariikhda ah, taas oo ka imaanaysa Daacish iyo ururrada ku xiran Al-Qaacidda.
Ururka Daacish ee haatan isugu yeera Khilaafada Islaamiga iyo ururro kale oo Al-Qaacida taageersan ayaa ka dagaallamaya dalka Suuriya iyo Ciraaq.
Maxkamad 8 bilood oo xabsi ah ku xukuntay R/wasaarihii hore ee Israel
Itoobiya: Natiijada codbixinta doorashadii shalay dhacday oo la sugayo